Okirikiri aja aja nke Puerto Egas, Puerto Egas - Islands Galapagos
South America Ecuador Obodo Galapagos
Osimiri aja aja nke Puerto Egas
Adreesị: osimiri dị n'akụkụ ebe ọdịda anyanwụ nke àgwàetiti Santiago, Galapagos Islands, Ecuador;
Osimiri kachasị ochie: ụbọchị dị n'agbata afọ 750,000.
Okirikiri aja aja nke Puerto Egas dị na Santiago, otu n'ime agwaetiti ndị dị na Colon ( Galapagos Islands ). Ndị njem na-aga ebe a ọ bụghị nanị iji hụ ájá ahụ dị iche iche, kamakwa ịga njem dịka akụkụ nke njem ndị gbara gburugburu agwaetiti ahụ.
Kedu osimiri ahụ?
N'ezie, ọ dịghị ihe pụrụ iche. Oké osimiri dị ka osimiri, naanị ájá dị na ya bụ oji. Nke a bụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na ọ bụ ihe ọ bụla ma e wezụga obere tuffụ nke mgbawa ojii ghọrọ ihe na-emighị emeri. A na-ewere ájá dịka ọgwụgwọ. Ọ bara uru karịsịa na ọrịa dịgasị iche iche nke usoro mgbu - arthrosis, ogbu na nkwonkwo, osteochondrosis. N'eziokwu, o yighị ka ọ ga-eziga njem nleta dị otú ahụ na onye nleta na-arịa ọrịa n'ezie. Otú ọ dị, mgbochi agaghị emerụ mmadụ ọ bụla. Ya mere, ịgha ụgha n'elu ájá ojii bara uru, foto ndị ahụ dịkwa mma.
Ozugbo e bibiri àgwàetiti Santiago, a na-etinye nnu ebe a. Ndị njem na-abịa n'ụsọ oké osimiri nwere ike ịgagharị na mkpọmkpọ ebe nke ụlọ ọrụ nnu, na-ele ọdụm ọdụm, chameleons, agụba. Obughi oke iga ije ije n'ubi. N'ebe a, ha bụ ndị pụrụ iche - na ụdị ihe dị iche iche, ebili mmiri, ebe a na-etinyerị, na-emepụta.
Kedu ihe m nwere ike ịhụ na nso?
Na mgbakwunye na ọdụm na agụba, onye kwesịrị ịchọta na ichu nta maka crabs. E nwere ọtụtụ n'ime ha. Na-acha uhie uhie na ngwa ngwa, ha na-agafe n'ikpere mmiri. N'ebe a, ị nwere ike ime ọtụtụ foto na-echefu echefu - ma na osimiri nke Puerto Egas, nakwa n'akụkụ osimiri ndị ọzọ na-acha ọcha. Kasị mma dị iche iche nke mmiri turquoise mmiri na lilac-pink nkume. Ọ na-ekpuchi ájá a nile na ájá ndị ahụ na ya.
Osimiri aja aja nke Puerto Aigas na Santiago dị ezigbo mkpa ịhụ mgbe ị na-aga njem na Islands Galapagos . A ga-ede akwụkwọ njem ahụ tupu oge ma ọ bụ kwurịta na o nwere ike ime nke a na onye ọrụ nleta gị.
Ogige Botanical (Buenos Aires)
The Museum Torres Garcia
Ụlọ elu Granite Peine
Kọlịflawa ji ya na cheese
Toxoplasmosis na nwamba
Ofe na anụ mpi
Ndị Sarafans maka Afọ Ọgwụ Afọ 2013
Ihe ịrịba ama na Pancake Day na-adọta ụmụ nwanyị, ọganihu na ịhụnanya
Kedu ka esi ewepu onye na-ewepụ ntutu isi?
Kedu ihe dọkịta ahụ na-atụ banyere ya?
Mmeputakwa ụmụ nwoke na akwarium
Ibe ntutu na henna na basma
Ndụ onwe onye nke Chris Evans
Nnwere onwe onye ahụ
Gịnị kpatara nrọ nke nna ya di?
Achicha na obere chiiz cheese chiiz
Mmeputakwa nke mosses